एनआरएनएसँग विकृत निर्वाचन पद्दतिको श्वेतपत्र जारी गर्ने हिम्मत छ ? | We Nepali
२०७७ भदौ १६ गते ७:११
अध्यक्ष पन्त र महासचिव शर्मा
समयसापेक्ष संगठनमा परिवर्तन आउनु र ल्याउन खोज्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । विश्वभरका संघसंस्थाहरुलाई नियालेर हेर्यो भने समयसापेक्ष परिवर्तन भैरहेको छ । धेरैभन्दा धेरै सदस्यको हितमा काम गर्न संगठनहरुमा परिवर्तन गर्नु पर्ने अनिवार्य सर्त हो । त्यस्ता कामका लागि विकसित मुलुकहरुमा आफ्ना कठिनाई नागरिकबाट सरकारसमक्ष पुर्याउन ईपिटिसनको व्यवस्था नै गरेका छन् । तर, तिनै विकसित देशहरुमध्ये जर्मनी र बेलायतमा आधा भन्दा बढी जीवन बिताइसकेका अध्यक्ष पन्त र महासचिव शर्माले छलफलका लागि ल्याएको स्वतन्त्र प्रस्तावमा लविङ गर्दै हिँडन थाल्नुले प्रस्ताव शंकाको घेरामा तानिएको छ । पदीय आचरण विपरीत प्रस्तावको पक्षमा वकालत गर्दै हिँडेपछि दुई उपाध्यक्ष सहित कार्यसमितिका सदस्यहरुले महासचिवको विरुद्धमा हस्ताक्षर बुझाएका छन् । जसका कारण नि:शुल्क सदस्यता, प्रतिनिधिको नि:शुल्क मतदान अधिकार, अनलाईन भोटिङ र एमआईएस सिस्टम लागु गर्ने अध्यक्ष र महासचिवको नियतमा शंका गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नि:शुल्क भन्ने शव्द झट्ट सुन्दा जति आनन्द लाग्छ, त्यो भित्रको अन्तरकथा थाहा पाउनु पर्छ । त्यसका लागि ८४ वटै राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसिसी) हरुमा राय सुझाव लिने र यसका सकारात्मक वा नकारात्मक पक्षका बारेमा खुला ढंगले छलफल गर्नु पर्छ । सुझाव र छलफल विपरीत केन्द्रीय नेतृत्व प्रस्तावको बचाउ र पक्षपोषणमा उत्रिनुले विश्वभरका एनआरएनएहरुमा थप आशंका जन्माएको छ ।
एनआरएनएले १७ वर्ष अबलम्बन गरेको निर्वाचन पद्दतिमाथि कार्यसमितिबाटै अर्काे प्रस्ताव आउनु राम्रो कुरा हो । तर विकृत निर्वाचन पद्दतिको कुरा गर्दा अध्यक्ष पन्त र महासचिव शर्माले निर्वाचनताका कति रुपैयाँ खर्च गरे त्यो सार्वजनिक गर्नु पर्छ । एक जना सामान्य एनआरएनए सदस्यले पन्त र शर्माले गत अक्टोबरमा नेतृत्व लिँदै गर्दा कुन-कुन राजनीति दलका नेताहरुमध्ये कस-कसलाई कति रकम बुझाउनु पर्याे । त्यो तपाई-हामीले थाहा पाउनु पर्दछ । आफू निर्वाचित हुन कुन-कुन एनआरएनए अभियन्ता भनाउँदा ठेकेदारहरुसँग भोटको लागि पैसाको मोलमोलाई गर्नु भएको थियो, त्यो श्वेतपत्रका रुपमा सार्वजनिक हुनु पर्छ ।
अझ महासचिव शर्माको हकमा भन्ने हो भने विकसित मुलुकको वैज्ञानिक शिक्षा लिएर पिएचडी समेत गर्न पाएका शर्माले पदमा निर्वाचित हुँदै गर्दा कति खर्च गर्नु भयो ? निर्वाचन पद्दतिको विकृतिको बारेमा बोल्दै गर्दा तपाईले त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिक कुरा मात्र गरेर १७ वर्ष धानेको निर्वाचन प्रणालीलाई विकृत भन्न पाइँदैन । यस विकृतिका बारेमा विश्वभरका एनआरएनएहरुले जान्न पाउनु पर्छ । बेलायतमा बसेर निर्वाचन प्रणालीलाई दोष देखाउनुको सट्टा यो निर्वाचन प्रणालीले तपाईलाई निर्वाचनमा के कति असर गर्यो ? कति प्रतिनिधिहरुसंग पैसा तिरेर भोट खरीद गर्नु भयो । त्यो श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुहोस् । यस निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधि छनोटका कुन-कुन अवगुणहरुले गर्दा तपाईले विश्वविद्यालय अध्यापन गराएर जम्मा गरेको कति पाउण्ड खर्च भयो त्यो हामी सबैले थाहा पाउनु जरुरी छ ।
संघको निर्वाचनमा राजनीति र पैसा कत्तिको हावी रहेछ ? त्यो खुलस्त पार्नु भयो भने सबैलाई निर्वाचन पद्दतिका बारेमा खुलस्त बुझ्न सजिलो हुन्छ । निर्वाचन अघि तपाई आफैंले राजनीति दलको सदस्यता देखाउने अनि अहिले राजनीतिक दलका नेताहरुले होटलमा अड्डा जमाउँछन् भनेर सामाजिक संजालमा लेख्न कार्यकारी पदमै बसेको व्यक्तिले अलि सुहाउँदैन कि महासचिवज्यू ? कुन कुन नेताहरुले होटलमा अड्डा जमाए नाम सार्वजनिक गर्नु सक्नु हुन्छ ? निर्वाचनमा कस-कसको पकेट भर्नु भयो ? सार्वजनिक गर्ने हिम्मत छ ?
नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा ६-६ महिनामा सरकार ढल्ने र बन्ने विकृतिलाई हटाउन त्यहाँका ठूला दलहरुले एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि २ वर्षसम्म ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेर कम्तिमा दुई वर्ष सरकार टिक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरे । त्यसो गर्दा सांसद खरीद-विक्रीदेखि सुरा-सुन्दरीसम्मका विकृतिका बारेमा एकै ठाउँमा बसेर स्वीकार गरी केही सुधार गरे ।
कम्तिमा हामी विकृतिका बारेमा सार्वजनिक रुपमा छलफल गरौं । अध्यक्ष हुने भविष्यको चाहनालाई पूरा गर्न एनआरएनएलाई प्रयोगको साधन नबनाउँ । डाक्टरको सर्टिफिकेट देखाएर नेता हुनुभन्दा पनि सबै एनआरएनएको भोट पाएर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्ष हुनु होस् । शुभकामना छ । यो निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत डा उपेन्द्र महतोले सुरु गरेको एनआरएनएलाई पन्तसम्म आईपुग्दा १७ वर्ष प्रयोग भएछ । अब तपाईको शक्ति हत्याउने चाहनाले कति वर्ष प्रयोग हुनु पर्ने हो ? नयाँ नेतृत्वसंगै नयाँ परीक्षण गर्ने प्रचलन सधैँलाई अन्त्य गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाऔं ।
तपाईले अहिले निशुल्क, अर्काेपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लैजाने एजेण्डा भनेको नेपालमा कम्युनिस्टहरुले भन्दै आएको ‘साम्यवाद’ र कांग्रेसहरुले भन्ने गरेको ‘समाजवाद’ को यात्रा जस्तै हो । त्यो भन्न पनि नछाडने ‘कहिल्यै पूरा पनि नहुने लक्ष्य’ हो । डाक्टर भैसकेपछि धेरैले विश्वास गर्ने भनेको प्रामाणिक कुरा गर्ने भएर हो । तपाई पनि झुटो बोलेर शक्ति हत्याउने कामभन्दा पनि प्रामाणिक कुरा गर्नुहोस् । इतिहास पल्टाउने हो भने डाक्टर नामधारण गरेका व्यक्तिहरु पनि धेरै नराम्रो काण्डमा जोडिएका छन् । त्यतिखेर डाक्टरको डिग्रीले काम गर्दैन किनकी तिनीहरुमा पनि लोभ र स्वार्थ देखिन्छ ।
त्यसबाहेक एनआरएनए एनसिसीमा उम्मेदारी दर्ता गर्न मात्र लाखौँ खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तो मंहगो निर्वाचनमा पैसा नभएको मानिस कसरी नेतृत्वमा पुग्न सक्छ महासचिव शर्माज्यू स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ? निशुल्क सदस्य र प्रतिनिधिका नाममा विश्वभरका एनआरएनए सदस्यहरुलाई झुक्याउन नखोज्नु होस् । बरु मंहगो निर्वाचन प्रणालीका हटाउन सक्ने प्रावधान छन् भने खुला छलफल गरौं । हाल पैसा खर्च गर्न नसक्ने वा पैसा नहुने सर्वसाधारण एनआरएनएमा प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था छ । कतिपय एनसिसीले त निर्वाचित भएका कार्यसमितिले कम्तिमा एक हजार अनिवार्य चन्दा तोक्ने गरेको छन् ।यसलाई कसरी लिने ? त्यसैले, निर्वाचन पद्दतिका बारेमा विश्वभरका एनआरएनए सदस्यहरुलाई जानकारी दिन श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस् । श्वेतपत्र जारी गर्ने हिम्मत छ तपाईहरुसँग ?